Nhau mumutambo wefoge: Radlands inotanga kuunganidza mari - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Jonas Dammen | May 6, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, crowdfunding, nhau
Parizvino kune mapurojekiti mashanu ekuunganidza vanhu vakawanda ari kushanda mukambani yemutambo. Kunyangwe hutsva hwakatanga nezuro muforogo hwakatozadzisa chinangwa chayo. Pamusoro pezvirongwa zviri kuitika, kekutanga pane zvakare peji rekuona kwechirongwa chiri kutarisirwa kutanga svondo rinouya.
Mushure mekunge Oranienburger Kanal yawana mari yakakwana kuGamefound mushure memaminitsi ari pasi pe30, hazvishamise kuti mutambo uyu watove pamusoro pechinangwa chekambani yemutambo. Kunyangwe kapfumbamwe chinangwa chekutanga chichakurumidza kuzadzikiswa, chirongwa ichi chinogona hazvo kutsigirwa. Mapato anofarira ane mazuva gumi nemaviri ekuita kudaro. Acropolis naIki vakatosvika pachinangwa chavo mazuva 12 isati yapera nguva yekubhadhara mari. Iyo purojekiti yakagamuchira mari yakawanda kusvika kure mutambo wekurondedzera The Dark Quarter. Nemamwe mavhiki mana emari asara, chinangwa chekutanga chakatopetwa katatu.
Radlands - Duel munyika yepashure-apocalyptic
Ichangobva kuvhota yakanakisa mutambo wevanhu 2 paGolden Geek Awards, iyo yekuGerman yenzvimbo Radlands kuburikidza neGrimspire kupinda crowdfunding. Mushure mehurombo husina kubudirira chirongwa cheGrimspire Nightmare Cathedral ndiko Radlands yakanga yatopihwa mari kupfuura 250% zuva rimwe chete mushure mekutanga.
Mune ino 2-mutambi wehunyanzvi kadhi mutambo, vatambi vanotora kutonga kwebato ravo munyika yepashure-apocalyptic. Mvura chinhu chinoshomeka pano uye chitubu chakakosha. Mutambo unopera kana makambi ese anopikisa aparadzwa. Kana murwi wedhirowa usina chinhu kechipiri, mutambo unopera uri mangange.
Nenzira imwecheteyo, vaviri vanoita mafambiro avo. Pakutanga kwekutendeuka, chiitiko chinogona kukonzerwa kana chiri munzvimbo yakakodzera. Makadhi echiitiko asara anokwira panzvimbo imwe. Zvadaro pane zviratidzo zvitatu zvemvura zvinogona kushandiswa muchikamu chechitatu, chikamu chekuita. Pano makadhi anogona kutambwa, kudhirowa kana kuraswa. Siro yemvura inogona kutorwa sechiratidzo chemvura uye kuraswa zvakare kune imwe chiratidzo chemvura. Zvakare, muchikamu chekuita, kugona kwemakadhi akagadzirira anogona kushandiswa.
Mutambo weRadlands 2-mutambi unotora pakati pemakumi maviri nemaminitsi makumi mana uye unokurudzirwa kune makore gumi nemana+. Izvozvo purojekiti inomhanya kwemamwe mavhiki mana.
Kwenguva yekutanga kune peji yekutarisa mune yemutambo forge. Iyo purojekiti nyowani yemutambo wemhuri iyo Mirakulus yemhuri inofara inonzi Fabelland. Zvisiri zvishoma nekuda kwemifananidzo yakanaka naLukas Siegmon (Hallertau, Nova Luna, Sagani, pakati pevamwe) vatambi 2-5 vanozvinyudza mupaki chete yemashiripiti epasirese. Pakutanga yakachengeterwa magamba engano, iyo fairyland inovhura masuwo ayo kumunhu wese. Mutambo wemhuri naMoritz Schuster unokurudzirwa kune makore gumi zvichikwira. Chinangwa ndechekuunganidza mabharumu akawanda.
Wese munhu anovaka zvinoyevedza zvakatenderedza makarosi makuru ari pakati penzvimbo yega yega yepaki. Vanoedza kukwezva vashanyi vazhinji sezvinobvira kune yavo yekukwezva nekutenderera zvine hungwaru kutenderedza carousel. Vaenzi vanoburuka kwese kwese uye kwete chete kune munhu akaruka karosi. Nenzira iyi, zvako zvinokwezva zvinozadzawo pazvitima zvevamwe. Kana kukwezva kwakazara, kutasva kunotanga uye kune mabharuni semubairo. Mushure mekufamba, vashanyi vanotanga vadzokera kunzvimbo yepakati pepaki kune chimbuzi, kudya kana kungozorora. Mabharumu akaunganidzwa anogona zvakare kuiswa mune zvitsva uye zviri nani zvinokwezva. Vanofurira vanokwezva vashanyi kune kwavo zvinokwezva vanogona zvakare kubhadharwa nemabharumu.
Crowdfunding yeFabelland inotarisirwa kutanga musi wa12 Chivabvu. Chero ani zvake angada kuziva zvakawanda nezve purojekiti isati yasvika uye anoda kutarisa mifananidzo uye mitemo yekutanga inogona kuzviita. pano kuita.
Diki asi rine simba rinopinda mumwaka wechina
ne mavhinga inotanga mwaka wechina we "Little Fine Ones" mumutambo wefoge. Iwo "vadiki vakanaka" ndiwo akateedzana akakosha emitambo anogona kungotsigirwa chete mumutambo wefoji. Wese zita remutambo wakaderedzwa kune izvo zvinonyanya kukosha: kunakidzwa, mitambo mechanics uye dingindira.
In kukukurwa Pakutanga kune makadhi maviri pakati. Rimwe kadhi rinoratidzwa uye mukati meminiti vatambi vanofanirwa kutsvaga nzvimbo yakanakisa yekadhi idzva uye cherechedza mapoinzi angazopihwa pakuriisa ipapo. Pakupera kweminiti, zvinotariswa kuti ndiani akanyora nhamba yepamusoro. Kana iwe ukabudirira kuratidza iyi nhamba nekudyara, unowana anowirirana mapoinzi. Orcas pamakadhi kaviri mapoinzi ezvisimbiso, polar bears uye Northern gulls pamakadhi.
Mutambo unopera kana 20-kadhi dhizaini isina chinhu. Ani nani aunganidza zvibodzwa zvakawanda ndiye anohwina mutambo. 2-6 vanhu vane makore 8+ vanosvika kumagumo emutambo mushure memaminitsi gumi nemashanu kusvika makumi maviri nemashanu.
Mumavhiki anotevera, vanosvika 8 Zvidiki faindi mazita muforogo. Zvese zvine “Bhadhara Zvaunoda” musimboti. Chirongwa chekutanga mavhinga ichiri kuwanikwa kwemazuva manomwe uye inogona pano tsigirwa.
Kare Iyo app ine shiri: Europe kuwedzera kweWingbeat inowanikwa digitally
Inotevera Vhura beta yemutambo wekumadokero zano Hard West 2 iri kushanda
SciFi dhirama "Tales Kubva kuLoop": Bhodhi mutambo uri kutengeswa
Spieleschmiede: Kuwedzerwa kumutambo wenyanzvi Tawantinsuyu kwapera